Eli lixabiso lePorsche Mission E, imoto yezemidlalo yombane | Iindaba zeGajethi
Ukongeza kwiTesla, sele kukho abo babheja kwiimoto zombane kwiimodeli zabo zexesha elizayo. Okwangoku sele kukho iimoto ezihlanganisiweyo zonke ezizezona zithengisa kakhulu njenge I-Nissan LEAF kwaye apho sele inenguqulo entsha ethiwe thaca ngokusemthethweni. Nangona kunjalo, zikhona ezinye ii- "premium" brand ezazisele zinike izimvo ngeenjongo zazo zokujongana neli candelo lenjini. Kwaye omnye wabo wayengumJamani IPorsche kunye neMishini yayo uE, imoto yezemidlalo efuna ukuma kwiimodeli ezithile ezivela kwinkampani kaElon Musk.
Ezinye iinkcukacha zobugcisa malunga nale prototype zazisele zisaziwa. Nangona kunjalo, bekusafuneka ukuveza ukuba liya kuba yintoni ixabiso lalo kwaye singafikelela nini kulo. Nangona kunjalo, Umphathi we-Porsche, u-Oliver Blume, unike idatha yokugqibela. Ngokunjalo, sinokukuxelela ukuba imali yokugqibela iya kufana naleyo ikhoyo ngoku iPorsche Panamera kwaye iya kufumaneka kwi-2019.
Ngokuka-Oliver Blume, kudliwanondlebe nephephancwadi Imagazini yeMoto, imodeli ethi ekugqibeleni ithengiswe ngo-2019, ayizukude kunokubonakala ngoku kumzekelo wokuqala. Kodwa, ngokunika ukufaneleka kuqala kwinto ekuya kufuneka siyibhatale, ukuba sikhokelwa lixabiso lePanamera ekungeneni eSpain, isixa ekufuneka sihlawule le Porsche Mission E iyakuba ngaphezulu nje kwe-100.000 euro. Nangona ulumkile, njengoko i-CEO ngokwayo igqabaza kudliwanondlebe, kuya kubakho izixhobo ezixhotyiswe ngakumbi kwaye ezinamandla ngakumbi. Ewe amaxabiso aya kuba phezulu.
Kwelinye icala, le Porsche Mission E ifuna ukubonelela nge Ukuzimela phakathi kwe-400-500 km ngentlawulo enye yebhetri kwaye kuya kuba nesantya esiphezulu se-250 km / h. Ukongeza, njengemoto yezemidlalo elungileyo, amanani awakhohlisi: ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100 km / h kwimizuzwana nje eyi-3,5.
Ekugqibeleni, le Porsche Mission E iya kulungela abahlali aba-4 (2 + 2) kwaye injini yayo iya kuvelisa malunga ne-600 hp. Ukongeza, kwabo bazibuza, ngokutsho kwenkampani, enkosi kwintlawulo ekhawulezayo eya kuthi ibonelele, umsebenzisi uya kuba nakho ukuhamba malunga ne-300 km enemizuzu eli-15 kuphela yokutshaja.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Eli lixabiso lePorsche Mission E, imoto yezemidlalo yombane